Maringe - Cloud Library
Pamba - Maringe
Maringe ne Raibhurari yemuGore
Messenger International (Mutumwa) yakazvipira nedonzvo rekuti mabhuku nedzidziso idzi zvitekeshere pasi rose kuVafundisi nevatungamiri zvisinei nekwavanobva kana mamiriro ehupfumi hwavo. Cloud Library yakagadzirirwa izvozvo. Ndiyo inofambisa basa rekugovera zvidzidzo nemabhuku zvakashandurwa kune imwe mitauro pasina muripo.
Chinangwa chedu ndechekuti zvidzidzo izvi zviwanikwe kumitauro yese. Izvi zvinotigonesa kuti zvidzidzo zvedu zviwanikwe nevanhu makumi mapfumabwe nevasere kubva muzana (98%) pasi rose. Raibhurari yemuGore ndiyo imwe nzira yekuti donzvo iri rizadzikiswe. Sei, mungabvunza? Nekuti mashoko emumhepo netsamba dzemagetsi anotekeshera huye kufambisa kudarika mabhuku anobatika. Tinovimba muchanakidzwa nekukomborerwa mugore.
Kubva Kune Vakasika
Jesu vakatipa basa kwete rekungoparidza Vhangeri chete asi kuti tiwedzere vadzidzi vavo. Mashoko nedzidziso idzi zvinokubatsira kuva mudzidzi wa Kristu. Tine tarisiro uye kutenda mauri nekukwanisa kuri mauri. Ndosaka tichitora nguva neupfumi hwedzidziso idzi tichiisa mauri, kuti nenyasha dzeMwari ukwanise kuunza shanduko muupenyu hwako nehwe vakakutenderedza. Mwari vakaisa ukuru mauri zvekare vanoda kuzivana newe zvakadzika. Upfumi uhwu hwedzidziso hunokubatsira kuva nehukama hwakadzika naMwari. Mukukura kwako muhukama naKristu unoshandurwa nesimba reShoko raMwari.
Mwari vakakusika uine chinangwa chako iwe dungamunhu chinoenderana nezvipo nesimba raavakakupa. Tinokukurudzira kuti utsvage zvizere zvakasikirwa naMwari. Munamato wedu kuti upfumi hwedziziso idzi huchakubatsira parwendo rwako rwekuzvitsvaga.
Makomborero Kwauri nevekwako
Moyo wako unotsvira here kuona dzidziso idzi dzichiparadzirwa pasi rose? Kana uine chido chekutsigira donzvo re Raibhurari yemuGore, tapota tumira tsamba yemagetsi ku getinvolved@cloudlibrary.org. Tinotenda neminyengetero pamwe netsigiro.